OTU ESI ELE PASWỌỌDỤ GỊ NA SKYPE - SKYPE - 2019
Kedu otu na ebe ị ga-ahụ paswọọdụ gị na Skype
SHAREit bụ ngwa njikwa maka ịnyefe faịlụ n'etiti ngwaọrụ dị iche iche. Ọzọkwa, mgbanwe nke ozi nwere ike ọ bụghị naanị n'etiti smartphones ma ọ bụ mbadamba, kamakwa na kọmputa / laptọọpụ. N'agbanyeghi na ihe omume a dị mfe iji mee ihe, ọtụtụ ndị nwere nsogbu na arụmọrụ ya. Ọ bụ banyere otu esi eji SHAREit n'ụzọ ziri ezi ma anyị ga-agwa gị taa.
Download ụdị ọhụrụ SHAREit
Kedu esi eziga akwụkwọ site na iji SHAREit
Iji nyefee faịlụ site n'otu ngwaọrụ gaa na ọzọ, ịkwesiri ijide n'aka na ha ejikọta na netwọk Wi-Fi ahụ. E kwuwerị, a ga-ebufe ozi site na nkwurịta okwu wireless. Maka nkwekọrịta gị, anyị na-atụle nhọrọ kachasị maka izipụ faịlụ n'etiti ngwá ọrụ dị iche iche.
Ngbanwe data n'etiti smartphone / mbadamba na kọmputa
Usoro a nwere ike ịbụ nnukwu ihe ọzọ na eriri USB, nke ị na-ebubu ịdakwasị ozi na ma ọ bụ site na kọmputa. Ihe omume SHARE na-enye gị ohere ịnyefee faịlụ na-enweghị oke ókè, nke bụ doro anya na nnukwu gbakwunyere. Ka anyị lee otu ihe atụ nke usoro nke ịnyefe data site na smartphone na-agba ọsọ Windows Mobile na kọmputa.
Anyị na-amalite usoro SHAREit na smartphone na kọmputa.
Na nchịkọta nhọrọ nke ngwa na ekwentị ị ga - ahụ bọtịnụ abụọ - "Zipu" ma "Nweta". Pịa na nke mbụ.
Ọzọ, ị ga-achọ ịdekọ data a ga-ebufe na kọmpụta ahụ. Ị nwere ike ịkwaga n'etiti ahịrịokwu a (Photo, Music, Ndi ana-akpọ, na ihe ndị ọzọ), ma ọ bụ gaa na taabụ "Njikwa / Njikwa" ma họrọ oke ozi ọ bụla iji nyefee site na ndekọ faịlụ. N'okwu ikpeazụ, ịkwesịrị ịpị "Họrọ Njikwa".
Mgbe ị na-ahọrọ data dị mkpa maka nnyefe, pịa bọtịnụ. "Ok" na akụkụ aka nri ala nke ngwa ahụ.
Mgbe nke ahụ gasịrị, windo windo ngwaọrụ ga-emeghe. Mgbe sekọnd ole na ole, usoro ihe omume ahụ kwesịrị ịchọpụta kọmputa ma ọ bụ laptọọpụ nke ị ga-eji na-agba ọsọ software SHARE. Pịa na oyiyi nke ngwaọrụ ahụ.
N'ihi ya, usoro njikọ n'etiti ngwaọrụ ga-amalite. N'oge a, ị kwesịrị ikwenye na ngwa ngwa ahụ na PC. A ga-egosi ọkwa ngosi na window SHARE'. Ikwesiri ịpị bọtịnụ ahụ "Nabata" na windo yiri ma ọ bụ isi "A" na keyboard. Ọ bụrụ na ịchọrọ izere ọdịdị nke arịrịọ dị otú ahụ n'ọdịnihu, tinye akara na-esote akara "Nabata faịlụ site na ngwaọrụ a mgbe niile".
Ugbu a ka ejikọta njikọ ahụ ma faịlụ ndị a họọrọ site na smartphone na-ebufe na kọmputa. N'ihi ya, na ekwentị gị ị ga-ahụ windo na ozi gbasara ịnyefe ozi. Iji mechie windo a, pịa bọtịnụ otu aha ahụ. "Mechie".
Ọ bụrụ na ịkwesịrị ịnyefe akwụkwọ ọ bụla site na ama gị, pịa bọtịnụ ahụ. "Zipu" na window mmemme. Mgbe nke ahụ gasị, kaa data ị gafee na pịa "Ok".
N'oge a na windo SHARE' na kọmputa ị ga-ahụ ozi ndị na-esonụ.
Site na ịpị na akara "Akwụkwọ"Ị ga-ahụ faịlụ na-agbanwe akụkọ ihe mere eme n'etiti ngwaọrụ ejikọrọ.
A na - echekwa data niile na kọmputa na nchekwa ndabara site na ndabara. "Downloads" ma ọ bụ Download.
Mgbe ị pịrị bọtịnụ nwere mkpịsị atọ na akwụkwọ akụkọ ahụ, ị ​​ga-ahụ ndepụta nke omume ndị dị maka akwụkwọ ahụ ahọpụtara. Ị nwere ike ihichapụ faịlụ, mepee ọnọdụ ya ma ọ bụ akwụkwọ ahụ n'onwe ya. Kpachara anya mgbe ị na-ehichapụ ọnọdụ. Ọ bụ ozi ahụ ebutelarị nke a na-ehichapụ, ọ bụghị naanị ntinye akwụkwọ.
Site na njikọ njikọ, ị nwekwara ike ịnyefe na smartphone niile ozi dị mkpa. Iji mee nke a, pịa bọtịnụ na windo ngwa ahụ "Faịlụ" ma ọ bụ igodo "F" na keyboard.
Mgbe nke ahụ gasịrị, ịkwesịrị ịhọrọ akwụkwọ ndị dị mkpa site na ndekọ ndekọ ma pịa bọtịnụ ahụ "Meghee".
A ga-agba akwụkwọ ndekọ ọ bụla dị mkpa na ndekọ ngwa. N'okwu a, ekwentị ahụ ga-egosipụta ngosi nke mmezigharị nke mbufe.
Iji chọpụta ọnọdụ nke akwụkwọ na ama gị, ịkwesịrị ịga na ntọala ngwa. Nke a na-eme mgbe ị pịrị bọtịnụ ahụ n'ụdị ogwe atọ na nchịkọta nhọrọ nke software ahụ.
Mgbe nke ahụ gasịrị, pịa na akara "Mbido".
N'ebe a, ị ga-ahụ ụzọ na akwụkwọ ndị a zoputara. Ọ bụrụ na-ịchọrọ, ịnwere ike ịgbanwe ya na onye ka mma.
Iji mezue mgbanwe ahụ, naanị ịkwesịrị imechi ngwa SHARE na ekwentị gị na kọmputa.
Maka ndị nwe Android
Usoro nke ịnyefe ozi n'etiti smartphones na-agba ọsọ gam akporo na kọmputa dịtụ iche na usoro ahụ dị n'elu. Na-ele obere anya n'ihu, anyị ga-achọ ịma na n'ọnọdụ ụfọdụ, ọ gaghị ekwe omume ịnyefe faịlụ n'etiti PC na gam akporo igwe n'ihi ụda nke ngwa ngwa ọhụrụ. Ọ bụrụ na ịchọta nke a, o yikarịrị ka ị ga-achọ ngwa ngwa ekwentị.
Ihe omumu: Na-eme ka ngwa gam akporo na MTK site na SP FlashTool
Ugbu a laghachi na nkọwa nke usoro mbufe data.
Anyị na-amalite na ngwa abụọ ahụ ngwa ngwa SHAREit.
Na ngwa ngwa ngwa na smartphone, pịa bọtịnụ ahụ "More".
Na menu na-emepe, họrọ ihe "Jikọọ na PC".
Iṅomi nke ngwaọrụ dịnụ amalite. Ọ bụrụ na iṅomi ahụ na-aga nke ọma, ị ga-ahụ ihe oyiyi nke usoro ihe omume ahụ na-arụ na kọmpụta ahụ. Pịa ya.
Mgbe nke ahụ gasịrị, njikọ nke kọmputa ga-amalite. Ị ga-ekwenye na njikọ nke ngwaọrụ dị na ngwa ahụ na PC. Dịka na usoro gara aga, pịa bọtịnụ ahụ. "Kwenye".
Mgbe ejikọtara njikọ, ị ga-ahụ ọkwa na windo ngwa na smartphone. Ka ịnyefe faịlụ ị ga-eji họrọ mpaghara achọrọ na ndị nọ na windo ihe omume ahụ.
Nzọụkwụ ọzọ bụ ịhọrọ ozi akọwapụtara. Naanị pịa akwụkwọ ndị dị mkpa na otu pịa, wee pịa bọtịnụ ahụ "Na-esote".
Nnyefe data ga-amalite. Mgbe ịmechara mgbanwe ahụ n'ihu faịlụ ọ bụla, ị ga-ahụ akwụkwọ ahụ "Emere".
A na-esi na kọmpụta wepụta faịlụ na otu ụzọ ahụ dịka na Windows Phone.
Ị nwekwara ike ịchọpụta ebe edere akwụkwọ na ngwaọrụ gam akporo gị na ntọala maka ngwa SHARE. Iji mee nke a, na nchịkọta nhọrọ, pịa bọtịnụ na akuku aka ekpe. Na ndepụta nke mmeghe omume na-aga na ngalaba "Nhọrọ".
Ọnọdụ mbụ ga-enwe ọnọdụ dị mkpa maka ọnọdụ nke data natara. Site na ịpị na akara a, ịnwere ike ịhụ ebe ozi natara, nke ị nwere ike ịgbanwe ma ọ bụrụ na ịchọrọ.
N'elu aka nri nke window nke ngwa SHARE, ị ga-ahụ bọtịnụ n'ụdị elekere. Nke a bụ akara nke omume gị. N'ime ya ị nwere ike ịchọta ihe ọmụma zuru ezu banyere ihe, mgbe na onye ị nwetara ma ọ bụ zitere. Tụkwasị na nke ahụ, ọnụ ọgụgụ zuru ezu nke data niile dị ugbu a.
Nke ahụ bụ nkọwa niile maka ịnyefe data n'etiti ngwaọrụ gam akporo / WP na kọmputa.
Nyefee faịlụ n'etiti kọmputa abụọ
Usoro a ga-enye aka n'ụzọ nkịtị n'ime ihe ole na ole iji weghaga ozi dị mkpa site n'otu kọmputa ma ọ bụ laptọọpụ gaa na ọzọ. Ihe kacha mkpa bụ njikọ nke ngwaọrụ abụọ ahụ n'otu netwọk Wi-Fi. Omume ndị ọzọ ga - abụ:
Meghee aka na kọmputa / kọmputa.
N'elu elu nke window window ahụ, ị ​​ga-ahụ bọtịnụ n'ụdị ogwe atọ. Pịa ya na ngwa nke kọmputa nke anyi choro iji nyefee akwukwo.
Ọzọ, netwọk netwọk ga-amalite maka ngwaọrụ dịnụ. Mgbe obere oge, ị ga-ahụ ha na radar usoro ahụ. Pịa na oyiyi nke ngwaọrụ dị mkpa.
Ugbu a na kọmputa nke abụọ ịkwesịrị ịkwado arịrịọ njikọ ahụ. Dị ka anyị dere na mbụ, maka nke a, ọ bụ iji pịa bọtịnụ na keyboard "A".
Mgbe nke ahụ gasịrị, na windo nke ngwa abụọ, ị ga-ahụ otu foto ahụ. Mpaghara a ga-edebe maka ihe ndekọ ihe omume ahụ. N'okpuru ebe a bụ bọtịnụ abụọ - "Kwụpụ" ma "Họrọ faịlụ". Pịa na nke ikpeazụ.
Mgbe nke ahụ gasịrị, windo maka ịhọrọ data na kọmputa ga-emeghe. Họrọ faịlụ ma kwado nhọrọ.
Mgbe oge ụfọdụ gasịrị, a ga-ebufe data ahụ. Na nso ozi a zitere n'ụzọ ziri ezi, ị ga-ahụ akara akara.
N'otu aka ahụ, a na-ebufe faịlụ na ntụgharị ihu na kọmputa nke abụọ na nke mbụ. Njikọ ahụ ga-arụ ọrụ ruo mgbe i mechiri ngwa ahụ na otu n'ime ngwaọrụ ma ọ bụ pịa bọtịnụ ahụ. "Kwụpụ".
Dịka anyị dere n'elu, a na-echekwa data niile eburu na nchekwa nchekwa. "Downloads". Na nke a, ịnweghị ike ịgbanwe ọnọdụ ahụ.
Nke a mezighara usoro nke ịgbanweta ozi n'etiti PC abụọ.
Izipu data n'etiti mbadamba / smartphones
Anyị na-akọwa usoro kachasịsịsịsị, ebe ọ bụ na ndị ọrụ na-agakarị SHAREit iji zipu ozi n'etiti ha smartphones. Tụlee ọnọdụ abụọ kachasị emetụta omume ndị dị otú ahụ.
N'ihe banyere izipu data si na ngwaọrụ Android n'otu ọzọ, ihe niile na-eme nnọọ mfe.
Anyị na-agbanye ngwa na otu na ama ọzọ / mbadamba.
Na mmemme nke ngwaọrụ nke anyị ga-ezite data, pịa bọtịnụ ahụ "Zipu".
Họrọ ngalaba achọrọ na faịlụ sitere na ya. Mgbe nke ahụ gasịrị, anyị pịa bọtịnụ ahụ "Na-esote" n'otu window. Ị pụghị ozugbo ezipụta ozi a ga-eziga, ma pịa nanị "Na-esote" iji jikọọ ngwaọrụ.
Anyị na-echere radar programmụ ahụ iji nweta ngwá ọrụ ga-enweta data ahụ. Dị ka usoro, ọ na-ewe sekọnd ole na ole. Mgbe achọtara ụdị ngwá ọrụ a, pịa ya na radar.
Anyị na-akwado arịrịọ njikọ na ngwaọrụ nke abụọ.
Mgbe nke ahụ gasịrị, ịnwere ike ịnyefe faịlụ n'etiti ngwaọrụ. Omume ahụ ga-abụ otu ihe ahụ mgbe ị na-ebufe faịlụ site na gam akporo gaa na kọmputa. Anyị kọwaara ha ụzọ mbụ.
A gam akporo - Windows ekwentị / iOS
Ọ bụrụ na ị ga-ebufe ozi ahụ n'etiti ngwaọrụ gam akporo na WP, omume ahụ ga-adịtụ iche. Ka anyị lebakwuo anya na usoro ahụ iji ihe atụ nke otu ụzọ Android na WP.
Anyị na-amalite SHAREit na ngwaọrụ abụọ ahụ.
Dịka ọmụmaatụ, ịchọrọ izipu foto site na Windows ekwentị na mbadamba gam akporo. Na ngwa na ekwentị na menu, pịa bọtịnụ "Zipu", anyị na-ahọrọ faịlụ maka ịnyefe na anyị na-amalite ịchọ ngwaọrụ.
Ọ gaghị enye ihe ọ bụla. Iji jikọọ ma ngwaọrụ abụọ nke ọma, ị ghaghị ịmalite ha. Iji mee nke a, na ngwaike gam akporo, pịa bọtịnụ "Nweta".
Na nkuku aka ekpe nke windo nke gosiri, ị ga-ahụ bọtịnụ "Jikọọ na iOS / WP". Pịa ya.
Ọzọ na ihuenyo na-egosi ntuziaka. Ihe kachasị mkpa bụ iji hụ na ngwaọrụ Windows ekwentị jikọọ na netwọk nke ngwaọrụ gam akporo. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, na Windows ekwentị, kwụpụ na netwọk Wi-Fi dị ugbu a ma chọọ maka netwọk ahụ kpọmkwem na ntụziaka dị na listi ahụ.
Mgbe nke ahụ gasịrị, ngwaọrụ abụọ ahụ ga-ejikọta. Mgbe ahụ, ị ​​nwere ike ịnyefe faịlụ site na ngwa ngwa ọzọ. Mgbe achichachara, netwọk Wi-Fi na ekwentị Windows gị ga-amaliteghachi.
Ndị a bụ nuances nile nke ngwa SHARE, nke anyị chọrọ ịgwa gị na nke a. Anyị na-atụ anya na ozi a nyere gị bara uru, ma ị nwere ike ịmepụta ntinye data na ngwaọrụ gị ọ bụla.
Java adịghị arụ ọrụ na Mozilla Firefox: isi ihe kpatara nsogbu ahụ
Ekepụta ihe ngosi RonyaSoft 2.03
Yandex na-ede, "Ma eleghị anya kọmputa gị na - ebute" - gịnị mere na ihe ị ga - eme?
Esi jikọọ Wi-Fi rawụta
Msvcp120.dll anaghị efu - ihe ị ga - eme ma ebe ị ga - ebudata faịlụ ahụ
Ịgụ na-eburu ọnọdụ dị mkpa ná ndụ nke ọtụtụ ndị mmadụ, ma ọ bụghị mgbe niile ka a na-ahụ ebe maka akwụkwọ akwụkwọ nkịtị. Akwụkwọ akwụkwọ dị mma n'ezie, ma akwụkwọ kọmputa dị mma karị. Otú ọ dị, na-enweghị mmemme maka ịgụ * .fb2, kọmputa agaghị enwe ike ịmata usoro a. Ihe omume ndị a ga-enye gị ohere imepe akwụkwọ na *. GụKwuo
Anyị na-ehichapụ ụbọchị ọmụmụ anyị na Odnoklassniki
Kedu kaadị TV TDP
https://termotools.com ig.termotools.com © Skype 2019